Monday September 10, 2018 - 19:59:39 in Wararka by Super Admin
Mas'uuliyiin iyo howlwadeenno katirsan maamulka degmada Hodon ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka sida ay xaqiijiyeen saraakiisha maamulka.
War kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in 20 qof ay ku dhinteen qaraxii maanta islamarkaana dhammaantood ay yihiin saraakiil iyo askar katirsan maamulka degmada Hodon.
"Saraakiisha Mujaahidiinta ayaa noo xaqiijiyey in camaliyadu ay si dhameystiran u burburisay xarunta, islamarkaana halkaas lagu dilay in ka badan 20 ka mid ah cadowga oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya" sidaas waxaa baahisay idaacadda Andalus.
Saraakiisha lagu dilay weerarkii maanta waxaa ka mid ah Sarkaal magaciisa lagu soo koobay Sandheere oo ahaa taliyaha ciidanka ee degmada iyo sarkaal kale oo lagu magacaabo Saciid Booloow oo ahaa sarkaal ka tirsan waaxda canshuuraha ee gobolka Banaadir kaas oo sidoo kale qaabilsanaa kormeerka illaa shan degmo oo ay ku jirtay degmada Hodan.
Sidoo kale saraakiishii sida aadka ah ugu dhaawacmay weerarka waxaa kamid ahaa Nin magaciisa lagusoo koobay Saciid oo ahaa madaxa Shatiyada ee maamulka degmada Hodan sida ay ilo wareedyo muhiim ah u xaqiijiyeen warbaahinta wararka ayaa intaas ku daraya in dhaawac daran soo gaaray nin lagu magacaabo Mahad Absuge oo isna ka mid ahaa saraakiisha maamulka degmada Hodon ayna isku dhowaayeen guddoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisa
ilo wareedyo kale waxay sheegayaan in qaraxii maanra ay ku dhimatay haweenay sarkaalad aheyd oo ku magacaawneed agaaismaha ururka haweenka qaranka degmada Hodon.
Sawirro lagasoo qaaday goobta qaraxu ka dhacay ayaa muujinayay burbur baaxad leh oo gaaray dhismaha xarunta degmada, waxaana la arkayay Meydad dhowr ah oo gudaha lagasoo daad gureynayo.